कोरोनाको डरले दिल्ली क्यापिटल्सको पुरै आइसोलेट, अब के हुन्छ आईपिएल ? | TajaKhabarTV
कोरोनाको डरले दिल्ली क्यापिटल्सको पुरै आइसोलेट, अब के हुन्छ आईपिएल ?
२०७८, २१ बैशाख मंगलवार १२:३२ May 4, 2021 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौँ । जारी इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) लाई कोरोनाले प्रभावित गर्ने सनेक्त देखिएको छ । सोमबार कोलकोता नाइटराइडर्सका दुई खेलाडी संक्रमित भएपछि रोयल च्यालेन्जर्ससँगको खेल स्थगित भएकोमा अब दिल्ली क्यापिटल्सको पुरै टिमलाई आइसोलेट गरिएको रिपोर्ट बाहिर आएको छ ।
कोलकोताविरुद्ध अप्रिल २९ मा खेलेको दिल्ली क्यापिटल्सको पुरै टिमलाई अहमदावादस्थित होटलमा आइसोलेट गरिएको छ । दिल्ली क्यापिटल्सले आफ्नो वेबसाईटमा कोलकातासँग खेलेकाले बीसीसीआईले सबैलाई आइसोलेसनमा बस्न भनेको बताएको छ । जसले सबै खेलाडी र स्टाफहरु होटेलमा नै आइसोलेसनमा रहेको बताएको छ । दिल्लीको अर्को खेल मे ८ मा कोलकोताविरुद्ध नै अहमदावादमा हुने तालिका रहेको छ ।
त्यस्तै मंगलबारका लागि दिल्लीस्थित फिरोज शाह कोटला मैदानमा हुने खेलका लागि मुम्बई इण्डियन्स र सनराइजरस हैदरावाद दुवै टिमको सोमबारको अभ्यास स्थगित भएको छ । कोटला मैदानका स्टाफलाई संक्रमण भएपछि दुवै टिमको अभ्यास रोकिएको बताइएको छ ।
यता सोमबार कोलकोताका वरुण चक्रवर्ती र सन्दीप वारियर संक्रमित भए भने चेन्नई सुपरकिंग्सका बलिङ कोच लक्ष्मीपति बालाजीसहित तीन जना स्टाफ संक्रमित भएका छन् । दुई खेलाडी संक्रमित भएपछि कोलकोताको टिम पनि पाँच दिनका लागि अहमदावादमै क्वारेन्टाइनमा रहेको छ ।
भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्डले यस सिजनको आपिएल गराउन रोजेका छ भेन्यु दिल्ली, मुम्बई, अहमदावाद, चेन्नई बेंगलुरु र कोलकोता भारतमा सबै भन्दा बढी कोरोना संक्रमण प्रभावित शहर भएकाले जारी आइपिएलको पुरै सिजन हुनेमा आशंका बढेको छ ।